सिनेमा अवलोकनका लागि सर्वश्रेष्ठ हेडफोन (डिसेम्बर २०२०) - सामान
सिनेमा अवलोकनका लागि सर्वश्रेष्ठ हेडफोन (डिसेम्बर २०२०)
तपाईको टेलिभिजन वा होम थियेटर प्रणालीको आवाज खण्डन गर्न कठिन प्रयास हुन सक्छ। आजकल, भित्ता पातलो छ, र यदि तपाईं परिवारका सदस्यहरू बस्नुहुन्छ भने, तिनीहरूले अशान्ति रुचाउँदैनन्। प्रायः तपाईका छिमेकीहरूले पनि गुनासो गर्न सक्छन्। त्यसोभए तपाईं कसरी यो समस्या हटाउन सक्नुहुन्छ?
यो सरल छ! आफैलाई हेडफोनहरू पाउनुहोस् जुन चलचित्रहरू हेर्नको लागि उत्तम काम गर्दछ! यी पारम्परिक हेडफोन भन्दा फरक छन् किनकि यी उत्कृष्ट ध्वनि गुणको लागि तपाईलाई वरपरका ध्वनिहरूको साथ एक इमर्सिभ अनुभव दिन्छ। अक्सर, यी हेडफोनहरूको ध्वनि दमन वा आवाज रद्द हुन्छ।
के तपाई फिल्म हेर्नका लागि उत्तम हेडफोन खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यसो भए तपाईको खोज यहाँ समाप्त हुन्छ! यस सूचीले तपाईंलाई विभिन्न कारकहरू विचार गर्न आवश्यकता कम गर्न मद्दत गर्दछ। हामी तपाईलाई समीक्षा दिन्छौं जसले तपाईको सुविधाका लागि बिन्दु जानकारीमा ल्याउँदछ।
हामीसँग एक क्रेता मार्गदर्शक र प्रायः सोधिने प्रश्नहरू यी जानकारीहरूको लागि यी उत्कृष्ट आविष्कारहरूको बारेमा तपाईंको शंका मेटाउनका लागि छन्। त्यसो भए सुरू गरौं!
सिनेमा हेर्नका लागि उत्तम हेडफोन - विज्ञ छनौट
१. COWIN E7 सक्रिय शोर रद्द क्या हेडफोन
बल्लको सुरूवात सुरू नै कोविन यसको हेडफोनका लागि रंगहरूको जीवन्त विकल्पको साथ हो। तपाईं आफ्नो प्राथमिकता फिट गर्न रंगीन मोडेलको दायरा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि बास प्रेमीको लागि, यो बाध्यकारी बास प्रणालीको साथ आउँदछ र उच्च-स्तरको ध्वनि गुणस्तर दिन्छ। हेडफोनहरू सक्रिय ध्वनि-रद्द गर्ने प्रविधिको साथ आउँदछन्, यसको मतलब हो कि उनीहरूले शोरलाई अझ भिजाउने काम सुरू गर्दछन् ताकि यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाई आफ्नो आवाजको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ प्रयोगमा हुँदा।
यसमा प्रोटिन एयर प्याडहरू छन् जसले आरामपूर्वक तपाइँको कान कभर गर्न सक्छ। बनावट छाला जस्तै लाग्छ, र त्यहाँ उचित हावा परिसंचरण छ। प्रोटीन प्याडको बावजुद, यो अझै पनि एक ओभर-इयर हेडफोन छ जुन hours घण्टा पछि असहज हुन थाल्नेछ। यसका साथै तपाईले आफ्नो संचार आवश्यकताहरू पूरा गर्न बिल्ट-इन माइक्रोफोन पाउनुहुनेछ। नियन्त्रणहरू सजिलो छन्, र तपाईंले आवाजको फुर्सत पाउनुहुनेछ सजिलोको लागि।
जडानको लागि, तपाईं दुबै ब्लुटुथ र NFC प्राप्त गर्नुहोस्। यो एक शक्तिशाली 5050० mAh ब्याट्रीको साथ आउँदछ जुन rupted० घण्टा सम्म अविरल प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। तपाईलाई बिजुली आपूर्ति को बारे चिन्ता गर्न आवश्यक छैन। यद्यपि चार्ज हुन चार घण्टा लाग्छ। थप रूपमा, तपाईं उल्लेखनीय ग्राहक सेवा सेवाको साथ एक १--महिना ग्यारेन्टी प्राप्त।
उल्लेखनीय hours० घण्टा ब्याट्री जीवन
काल्पनिक बास प्रदर्शन
निर्दोष ध्वनी गुणवत्ता
ब्लुटुथ र NFC सक्षम
चार्ज गर्न4घण्टा लाग्छ
Hours घण्टा भन्दा धेरै लगाउन सक्दैन
२. आर्टिस्ट वायरलेस हेडफोन
यहाँ तपाईंसँग हेडफोन छन् जुन यसको अनौंठो २.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस टेक्नोलोजीको साथ आउँदछ। हेडफोन एक अतिरिक्त इकाईको साथ आउँदछ जुन तपाईंको सुविधाको लागि तीन पटक ब्लुटुथ (१०० फिट सम्म) को साथ अटुट जडान प्रदान गर्दछ। यसैले, तपाईको वरिपरि हिंड्न सजिलो बनाउँदछ।
यो कनेक्टिविटीमा वास्तवमै सार्वभौमिक हो किनकि यो आउक्स (3.5.mm मीमी ज्याक), आरसीए, एक अप्टिकल जडान, र वायरलेस ब्लुटुथ जडानको साथ आउँदछ। तपाईं कुनै समस्या बिना लगभग कुनै उपकरणको साथ यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हेडफोनहरू तपाईंको बास आवश्यकता पूरा गर्न ०.%% विकृतिको साथ डिजिटल जडानको लागि उत्कृष्ट छन्।
यी हेडफोनहरू ओभर-द-ईयर मोडेलहरू र आरामदायक प्याडि withको साथ आउँदछ घण्टा विस्तारित प्रयोग सक्षम गर्न। तपाईं हेडफोन चार्जिंग डकमा जोड्नुहुन्छ, जुन कनेक्टिभिटी बडी पनि हो। चार्जको सजिलोसँग मेल खाएन, र यसले प्रति चार्जको २० घण्टाको नन-स्टप प्रदर्शन प्रदान गर्दछ।
प्रयोगकर्ता अनुकूल मैनुअल र भिडियो निर्देशनहरूको साथ सेट अप गर्न यो सजिलो छ। समग्रमा, हेडफोन मनोरञ्जनको अनुभव र टिभी जडानको लागि तपाईंको घरको आवश्यकताको लागि उत्कृष्ट हो। जहाँसम्म, तिनीहरू कि विभाग मा कुरकुरा ध्वनी पूरा गर्न महत्वपूर्ण डोल्बी डीटीएस समर्थन को कमी छ।
औक्स, अप्टिकल केबल, आरसीए, र ब्लुटुथ जडान
स्मार्ट शक्ति नियन्त्रण र छिटो चार्ज (२ घण्टा)
कुनै स्थिर छैन, पारंपरिक ब्लुटुथको दायराको साथ तीन पटक कुनै विकृति छैन
२० घण्टा विस्तारित प्रदर्शन
डोल्बी डीटीएस समर्थनको लागि धेरै प्रस्ताव गर्दैन
बाहिरी प्रयोगको लागि उपयुक्त छैन
Sen. सेन्हाइजर RS120 अन-ईयर वायरलेस आरएफ हेडफोन
सेन्हाइजर लामो-स्थायी प्रदर्शनको लागि हेवी-ड्युटी हेडफोनहरू निर्माण गर्नका लागि परिचित छ। यो पक्ष हेडफोनको यो जोडीमा उनीहरूको २ बर्षे वारेन्टीको साथ विस्तार गरिएको छ। यहाँ तपाईं पालना चार्ज स्टेशनको साथ सेन्हाइजरको प्रदर्शनमा निर्भरता पाउनुहुनेछ।
चार्जिंग स्टेशन टिभी, कम्प्युटर, र अन्य उपकरणहरूसँग जडान हुनको लागि एकाईको रूपमा कार्य गर्दछ। तपाईले आरसीए बिभिन्न ज्याकहरू सजिलैसँग प्रयोग गरेर जडान गर्न सक्नुहुन्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, स्टेशनले feet०० फिट सम्मको दायरामा कुनै पनि विकृति वा स्पष्टताको लागि कुनै अवरोध बिना नै असाधारण ब्लुटुथ जडान प्रस्ताव गर्दछ।
हेडफोनहरू हल्का शरीरको साथमा ईयर डिजाइन छन्। यसले एकल चार्जको साथ २० घण्टाको नन स्टप प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। यद्यपि यस इकाईको सब भन्दा उल्लेखनीय सुविधा अन्य हेडफोनको साथ कनेक्टिविटी हो। तपाईं अन्य आरएस १२० हेडफोनहरूलाई एकल एकाइमा जडान गर्न सक्नुहुनेछ, यसको मतलब यो छ कि तपाईंको टेलिभिजनको आवाज ध्वस्त नगरी धेरै व्यक्तिहरू सँगै चलचित्रहरूको आनन्द लिन सक्दछन्!
जबकि यो भण्डारण गर्न र जडान गर्न सजिलो छ, यसको लागि उत्कृष्ट छ चलचित्र हेर्दै घर वा कोठामा। तपाईं यसलाई आफ्नो फोनसँग कहिँ पनि बोक्न सक्नुहुन्न किनकि यो यात्रा मैत्री छैन। ब्लुटुथ सीधा सम्पर्क गर्दैन। तपाईंले युनिटलाई उपकरणको लागि एन्टलगमा जडान गर्न आवश्यक छ।
निर्दोष ध्वनि गुण र २-वारेन्टी
लाइटवेट र लगाउन सहज छ
बहु RS 120 हेडफोनको साथ जडान गर्न सकिन्छ (छुट्टै बेचिएको)
मजबूत वायरलेस कनेक्टिविटी (f०० फिट दायरा सम्म)
पालना चार्जरको साथ पहुँचयोग्य चार्जिंग स्टेशन
केन्द्रीय एकाई अन्य उपकरणहरूसँग ब्लुटुथ मार्फत जडान हुँदैन
यात्रा मैत्री विकल्प होईन
IL. फिलिप्स डिजिटल वायरलेस हेडफोन
फिलिप्सले तपाईंलाई यी व्यक्तिगत हेडफोनहरूको साथ घरमा व्यक्तिगत मनोरंजन प्रणालीको लागि अन्तिम विकल्प ल्याउँदछ। Meters० मिटरको प्रभावकारी दायरा, २० घण्टा ब्याट्री जीवन, र mm. mm मीमी ज्याक समर्थनको साथ, तपाईंसँग एक विस्तृत मनोरन्जन एकाई छ। फिलिप्सले स्टुडियो-गुणवत्ता उच्च परिभाषा ध्वनि प्रदान गर्दछ, जुन उद्योगमा अनुपम रहन्छ।
सिनेमाई अनुभव को लागी, तपाई ब्रोड हेडफोन पाउनुहुन्छ। चार्जिंग डक स्टाइलिश र आधुनिक डेकर फिट गर्न स्लिम छ। यससँग हेड फिट र वेभल प्याडहरूको लागि स्वचालित ह्यामॉक समायोजन छ जुन तपाईंलाई अत्यन्त सान्त्वना दिन्छ। योसँग एक स्वचालित अन र अफ फंक्शन छ जुन तपाईंको सुविधाको लागि तपाईंको हेडफोनमा राख्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यहाँ कुनै कनेक्टिभ ल्याग छैन।
ठोस बास र कुरकुरा ध्वनी गुणवत्ता फिलिप्सको हस्ताक्षर हो यसको mm० एमएम बास बूस्टि drivers ड्राइभरहरूको साथ।यो धेरै हल्का हेडफोन हो जुन तपाईंको टेलिभिजन प्रणालीसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। डकि station स्टेशनसँग भित्र-भित्रको चार्जर छ, र तपाईं अधिकतम प्रदर्शनको लागि समयसँगै ब्याट्रीहरू बदल्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं हेडफोनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ जुन घण्टासम्म लगाउन सहज छ र तपाईंलाई उत्कृष्ट ध्वनि गुण ल्याउँछ भने, यो तपाईंको लागि सही विकल्प हो। ज्याक कनेक्टिभिटीको साथ, तपाईं कुनै अवरोध बिना जडित रहन सक्नुहुनेछ। सबै टिभी मोडेलहरूसँग यसले राम्रोसँग काम गर्दछ।
उल्लेखनीय ध्वनि र बास गुणवत्ता
प्रीमियम-ग्रेड सामग्री र निर्माण
स्वचालित समायोजन र / बन्द
ईयरफोन ज्याक यदि ब्याट्री सकियो भने
मानक कनेक्टिविटी, विशेष केहि छैन
Sony. सोनी वायरलेस हेडफोन
सोनी यसको पूर्ण प्रणाली उपलब्धताका साथ चलचित्रहरू हेर्नका लागि उत्तम हेडफोनको रूपमा विश्व-स्तरीय चयनमा रहन्छ। यो डकको साथ आउँदछ जहाँ तपाईं तपाईंको हेडफोनहरू र बहुमुखी कनेक्टिभिटी विकल्प प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। साधारण ब्लुटुथ आवश्यकताबाट पुरानो-स्कूल आरसीए केबलहरू, एएक्स सहित, तपाईं एक पूर्ण जडान प्रणाली पाउनुहुन्छ
बीस घण्टाको ब्याट्री जीवन र १ 150० फिट सम्म निर्बाध कनेक्शन एक ठूलो प्लस हो। अवश्य पनि, यो एक सोनी उत्पादन हो रूपमा, तपाईं अडियो आराम को एक विस्तृत श्रृंखला छ। भोल्यूम नियन्त्रणको साथ आवाज मोड र स्वत: ट्यूनहरू छन्। तपाईले आवाज कम गर्न र उच्च बास उत्पादनलाई उच्च परिभाषा ध्वनीको साथ पाउनुहुन्छ जुन ठीक ठीक फिट हुन्छ।
यो एक हाई-फाई मनोरञ्जन हेडफोन हो, त्यसैले यदि तपाईं तपाईंको घरको आराममा सिनेमाको अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो एक उत्तम साथी हो। सिमलेस आरामको लागि समायोजन फिट गर्न सजीलोसँग हेडफोनहरू धेरै हल्का छन्। समग्रमा, यो सोनीको ब्रान्ड विश्वसनीयताको साथ धेरै मानक हेडफोन छनोट हो।
बहुमुखी कनेक्टिभिटी विकल्प
उत्कृष्ट ध्वनि र बास गुणवत्ता
मानक डक र चार्ज प्रणाली
सोनीको गुणवत्ता आश्वासन
प्रयोग गर्न सजिलो छ
कार्य गर्न डक स्टेशन आवश्यक छ
मानक घर थिएटर हेडफोन
Sen. सेन्हाइजर आरएस Digital००० डिजिटल वायरलेस हेडफोन
यदि तपाईं हेडफोन मन पराउनुहुन्न र 'ईयरफोन' डिजाइनको नजिक केहि चाहानुहुन्छ भने, यहाँ सेन्हाइजर अर्को उल्लेखनीय नवीनताका साथ फिर्ता आउँदछन्। RS 5000 तपाईंको टिभी मनोरन्जनको लागि 'प्लस' प्रदान गर्नका लागि परिचित छ। सबै भन्दा पहिले, यस सँग एक ईयरफोन को सुविधा र हल्का वजन को शरीर छ कि यो हेडफोन भन्दा बढी सहज बनाउँछ।
तपाईं अधिक अनुकूलन विकल्पहरूको साथ उही त्रुटिहीन अडियो गुणवत्ता प्राप्त गर्नुहोस्। त्यो सहि छ! तपाइँको अडियो आवश्यकता चयन गर्न र पूरा गर्न तीन पूर्व प्रोफाइलहरू प्रिसेटको रूपमा उपलब्ध छन्। त्यो सबै होइन। तपाईले अडियो आउटपुटलाई व्यक्तिगत बायाँ र दायाँ भोल्युम नियन्त्रणको साथ अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ।
यसको आवाज-सक्रिय आदेशहरू कलाको राज्य हो र सूचीमा अन्य कुनै हेडफोनहरू भन्दा फरक लिगमा। तपाईको इयरफोनमा ‘+’ चिन्ह थिचेर, तपाई राम्रो परिणामका लागि तपाईको भ्वाईस आदेशहरू निश्चित रूपमा पढ्न बौद्धिक टेक्नोलोजीको साथ आदेश आरम्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाहेक, यसमा एक स्लिम डिजाइन छ जुन तपाईं टिभीको नजिकै मुख्य डक स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ।
यसको पहुँच र कनेक्टिभिटी सूचीमा अन्य हेडफोनको बराबरीमा छ। तपाईं यसलाई चार्जको लागि डकमा माउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, र यसको स्वत: चार्जिंग सुविधाले अधिक शुल्कबाट बचाउँछ। यसैले, तपाईं यसलाई तपाईंको डकमा राख्न सक्नुहुन्छ जुन टिभीको नजिक हुन सजिलो पहुँचको लागि हुन सक्दछ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यससँग अप्टिक केबल, आरसीए, ऑक्स र अधिक धेरैबाट विस्तृत जडान विकल्पहरू छन् तपाईलाई अत्यन्त आराम लिन। ध्वनी प्रदर्शन, बास गुण, र सबै कुरा अत्याधुनिक छ र पछिल्लो टेक्नोलोजीको साथ अप टु डेट छ।
कम्प्याक्ट डिजाइन र प्रयोगकर्ता सुविधा को लागी स्थापना गर्न सजिलो
स्मार्ट नियन्त्रणहरू, बुद्धिमान आवाज पाठक
ध्वनि प्रोफाइल र व्यक्तिगत ध्वनि नियन्त्रणको साथ अनुकूलन योग्य
ईयरफोनको सुविधा र हल्का वजन
लगाउन र वरिपरि हिँड्न महान छैन
अगाडि आवाजको लागि ठूलो ‘प्लस’ शरीरको कारण वजनमा अलि असंतुलन
Sony. सोनी RF400 वायरलेस होम थियेटर हेडफोन
के तपाईं होम थियेटर हेडफोनको लाइनमा केहि खोज्दै हुनुहुन्छ? तीको उद्देश्य के हो? कुरकुरा ध्वनी गुणस्तर, वरिपरि ध्वनि, र बासको साथ फिल्महरूको लागि तपाईंलाई एउटा इमर्सिभ अनुभव ल्याउनको लागि। हामी सबै सहमत हुन सक्छौं कि सोनी होम थियेटर अनुभव प्रदान गर्नमा अग्रगामी हुन्, र यो हामी यस वायरलेस होम थियेटर हेडफोनबाट प्राप्त गर्छौं!
१.77 ईन्च ध्वनि ड्राइभरहरूको साथ, तपाईं मजबूत ध्वनि दमन र उच्च परिभाषा ध्वनी आउटपुट पाउनुहुनेछ। आसन्न कनेक्टिविटीले वरिपरिबाट आवाज दबाउँदा कुनै पनि विकृति वा स्थिर हटाउँछ। तपाईले १ f० फिट अनइन्ट्रिप्टेबल कनेक्टिभिटी पाउनुहुन्छ।
सुविधा, भोल्युम, अटो प्रोम्प्ट, र हेडफोन साइडमा अन्य अंतर्निहित बटनहरूका लागि यससँग सजिलो नियन्त्रण छ। आवाज रिसीभर पारदर्शी र सटीक छ। चाहे तपाइँ एक चलचित्र स्ट्रीमिंग खोज्दै हुनुहुन्छ वा द्वि घातु। अवलोकन कार्यक्रम हेर्नुहोस्, तपाइँ लामो गतिविधि को लागी आरामदायक इयर प्याड प्राप्त गर्नुहुन्छ।
थप रूपमा, यससँग २० घण्टा ब्याट्री जीवन छ। योसँग 'सेटअप-एन्ड-विर्सन' सुविधा छ, जसले तपाईंलाई डकलाई टिभीमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ। हेडफोनहरू स्वचालित रूपमा पोर्टहरूसँग जडान हुनेछ, र डक्सहरू तपाईंको हेडफोनको लागि चार्जिंग समर्थनको साथ आउँदछ। यद्यपि यससँग वरिपरि ध्वनि वा डॉल्बी डिजिटल समर्थन छैन।
व्यक्तिगत मनोरंजनको लागि नमिल्दो ध्वनि उत्पादन र गुणस्तर
मानक डक, कनेक्टिविटी, र मोडेल
हेडफोनमा सजिलो नियन्त्रण
कुनै वरपर ध्वनि विकल्प छैन
कुनै डॉल्बी डिजिटल समर्थन छैन
CO. COWIN E8 सक्रिय आवाज रद्द हेडफोन
काउइन मनोरञ्जन उद्देश्यका लागि यसको आश्चर्यजनक यात्रा मैत्री हेडफोनको साथ सूचीमा फिर्ता छ। यद्यपि यस व्यक्तिको ब्याट्रीमा एक सानो कटौती छ, २० घण्टाको प्रस्ताव राख्दै, मजबूत ह्याण्डलिंगका लागि अधिक पर्याप्त बडीको साथ! प्रबलित सक्रिय ध्वनि रद्दको अर्थ यो हो कि तपाईं जहाँ गएपनि यी हेडफोनहरू काम गर्न सक्नुहुनेछ।
ध्वनि रद्दको साथ, तपाईं उल्लेखनीय ध्वनी गुणवत्ता पाउनुहुन्छ। तुलनात्मक रूपमा, यो सूचीमा अरूहरू भन्दा कुरिलो अडियोको साथ २ cris% उत्तम ध्वनि आउटपुट प्रदान गर्न सक्दछ। यो यसको १०० डीबी पावर प्याक ड्राइभरहरूको साथ स्पष्ट छ। नरम इयर कुशनहरू head ०-डिग्री रोटेशनको साथ राम्रो हुन्छ तपाईको टाउकोको आकार र चालहरूको आधारमा लचिलो रूपमा फिट हुन। चुम्बकीय शोषण पक्कै पनि oozes वर्ग।
तपाइँसँग जडानको लागि प्राय: सबै उपकरणहरूसँग ब्लुटुथ उपयुक्त छ, चाहे यो तपाईंको स्मार्टफोन, टिभी, वा ल्यापटप हो। यो एक संचार माइक्रोफोनको साथ आउँदछ तपाईंको संचार आवश्यकताहरू पूरा गर्न। अरु के छ त? त्यहाँ भोल्युम नियन्त्रणमा निर्मित छ, छोड्नुहोस् र रिवाइन्ड पनि अधिक सुविधाको लागि एकीकृत गरिएको छ।
सापेक्षिक रूपमा, थोरै कम ब्याट्री जीवन (२० घण्टा) ले ब्याट्री आकार र हेडफोनको समग्र वजन कम गर्दछ। तपाईं अझै पनि १ 18 महिनाको उल्लेखनीय वारेन्टी र असाधारण ग्राहक सेवा सेवाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्न। यदि यो वास्तवमै तपाईंलाई चाहिने पोर्टेबल हेडफोन हो भने, यो तपाईंलाई प्राप्त गर्न सक्ने उत्तम हो।
बहुमुखी ब्लुटुथ कनेक्टिविटी
यात्रा मैत्री र हल्का वजन
२० घण्टा ब्याट्री लाइफ, ईयरफोन ज्याक यदि तपाईं ब्याट्री सकुशल हुनुभयो भने
उल्लेखनीय अडियो गुणवत्ता
महान अंडर-बजेट हेडफोन
मानक कोविन हेडफोन भन्दा कम ब्याट्री जीवन
अझै थोरै भारी डिजाइन
सिनेमा हेर्नका लागि क्रेताको गाइड सर्वश्रेष्ठ हेडफोनका लागि:
तपाईले बनाउनु भएको सब भन्दा पहिले विचार तपाईले किनेको हेडफोनको प्रकार हो। बजारमा दुईवटा मोडेलहरू उपलब्ध छन्।
यसले तपाइँको कानलाई पूरै ढाक्छ र परिवेशको आवाज रद्द गर्नका लागि उपयोगी साबित गर्दछ। यसैले, यसले तपाईंको कानको लागि आवाजको एक अबाध प्रवाहको लागि बाह्य ध्वनि रद्द गर्दछ। इयर मोडेलमा, प्राय: समय निजी मनोरन्जनको लागि उत्कृष्ट हुन्छ जहाँ तपाईं कुनै गडबड चाहनुहुन्न।
यद्यपि, तिनीहरूसँग वायुवीजनको कमी छ। यसले तपाइँको कान वरिपरि तातो र पसीना निर्माणमा पुर्‍याउँछ, जुन असहज हुन सक्छ। तपाईंले हेडफोनको साइजलाई विचार गर्न सक्नुहुनेछ यो निश्चित गर्नका लागि कि यो तपाईको कानमा आरामसँग फिट छ। अन्यथा, यसले असुविधा पैदा गर्न सक्दछ।
यी तपाईंको कानमा फिट छन्, प्राय जसो कुशनको साथ जुन तपाईंको कानमा आरामदायक छ। उचित भेन्टिलेसनको साथ, तपाईं तिनीहरूलाई चाहानुहुन्छ उनीहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ, र तपाईंको कानको फिटिंग सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो छैन।
अन-ईयर हेडफोनहरू यात्रा को अनुकूल र हल्का वजनका लागि तपाईं कहिँ पनि सजिलोसँग कहिँ बोक्नुहुन्छ। जे होस्, तिनीहरू कुशल ध्वनि रद्द गर्न प्रदान गर्दैन।
कस्तो प्रकारको हेडफोन तपाईको लागि उत्तम हो भन्ने निर्णय पछि, तपाईलाई अधिक गहन विचारहरुमा जानको लागि यो समय हो।
आधुनिक हेडफोन कनेक्टिभिटी विकल्पको दायराको साथ आउँदछ। तपाईं एक पारम्परिक ज्याक वा USB विकल्प पाउनुहुन्छ। धेरै जसो आधुनिक हेडफोनसँग ब्लुटुथ जडान ब्याट्री लाइफको साथ छ। तिनीहरू ज्याकको मौकाको साथ आउँदछन् यदि तपाईं ब्याट्री सकुशल हुनुभयो भने। यो सुविधाजनक सुविधा हो।
यदि तपाईं एक ब्याट्री द्वारा संचालित हेडफोन प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, दृढतापूर्वक विचार गर्नुहोस् कि यसले कति चार्ज लिन सक्दछ। त्यस्तै, प्रदर्शन को कति घण्टा प्रदान गर्दछ जाँच गर्नुहोस्। कसरी तपाई हेडफोन चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे पनि विचार गरिनु पर्छ।
यो उत्तम हुनेछ यदि तपाई सार्वभौमिक अनुकूलताको साथ हेडफोन पाउनुहुन्छ। लगभग सबै उपकरण आज हेडफोनको साथ जडान गर्न सकिन्छ। यो मोबाइल फोन, ल्यापटप, पीसी, वा टिभी सेट हुन सक्छ। गेमिंग सहित टेक्नोलोजिकल क्रान्तिको युगमा तपाईंले विभिन्न गतिविधिका लागि व्यापक रूपमा उपयुक्त हेडफोन प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
हेडफोनमा उचित भोल्टेज र पावर मर्मतका लागि जाँच गर्नुहोस्। बिभिन्न उपकरणहरूका अलग पावर आउटपुटहरू छन्। केही हेडफोन एक विश्वव्यापी ज्याकको साथ आउन सक्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईं यसलाई कहिँ पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शक्तिको अत्यधिक बहावले बिस्तारै तपाईंको इयरफोनलाई बिगार्नेछ। यसले तपाईलाई इलेक्ट्रोकेट पनि गर्न सक्दछ। सुरक्षित हुनको लागि, सही हेडफोनहरू लिनुहोस्।
तपाईको सुविधाको लागि कम्पनीहरूले तपाईको हेडफोनका लागि बाह्य नियन्त्रणहरू समेकित गर्दै छन्। एक पूर्वनिर्धारित छनौट भोल्यूम नियन्त्रणको साथ एक हुने थियो। यद्यपि धेरै हेडफोनसँग अतिरिक्त आदेशहरू छन्, जस्तै प्ले र पज। केहिसँग ट्र्याक परिवर्तन गर्न वा अपग्रेड गर्न विकल्प हुन्छ, पुरानो संगीत-प्रणालीहरू र वाकमेनसँग समान।
यसबाहेक, माईक तपाईंको संचार आवश्यकताहरू पूरा गर्न लगभग सबै हेडफोनमा एकीकृत हुन्छ। यस अवस्थामा, हेडफोनसँग कल प्राप्त गर्न वा रद्द गर्न विकल्प हुन सक्दछ। यी सुविधाहरूको उपलब्धता मात्र आवश्यक कारक होइन। यी बटनहरू कसरी मोडेलमा एकीकृत हुन्छन् त्यसले पनि महत्व राख्दछ।
यी नियन्त्रणहरू प्रयोग गर्न सजिलो हुनुपर्दछ र छुट्टिनु हुँदैन तपाईलाई भ्रमित गर्नका लागि। धेरै हेडफोन भ्वाईस कमाण्डको साथ आउँदछन् र अब प्रम्प्ट गर्नुहोस्, विशेष गरी होम थियेटर हेडफोनहरूको लागि। त्यसोभए, तिनीहरूलाई जाँच्नुहोस्।
डिजाइन र सामग्री:
तपाईको हेडफोनको प्रयोगलाई ध्यान दिनुहोस् र बिल्डको चिन्तन गर्नुहोस्। यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईसँग एक टिकाऊ हेडफोन छ जुन शक शोषण गर्न सक्छ। हेडफोन एक उपकरणमा छ जुन ड्रपको बढी सम्भावना हुन्छ।
यसका साथै उचित फिटिंग खोज्नको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ। धेरै हेडफोन तपाईको टाउकोमा पुग्नको लागि समायोज्य शरीरको साथ आउँदछ र तपाईको टाउको दृढताका साथ ब्रेस गर्दछ। ग्रिप, कान कुशनका लागि सामग्रीको प्रकार, र सामग्रीको गुणस्तरले तपाईंको हेडफोनको दीर्घायुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
आवाज रद्द वा दमन:
निश्चित गर्नुहोस् कि दुई सुविधाहरू बीच महत्वपूर्ण भिन्नता याद गर्नुहोस्। त्यहाँ विरलै हेडफोनहरू छन् जसले आवाज रद्द गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछन्। धेरै जसो आवाज दमन एकीकरणको साथ आउँछन्। यद्यपि, अन-इयर र ओभर-इयर हेडफोन हुनुको अलावा, यो उचित विचार गर्न सकिन्छ।
ध्वनि-रद्द गर्ने हेडफोनसँग प्राय: बाह्य ध्वनि काउन्टर गर्न थप कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् र तपाईंलाई आवाजको आनन्द लिनको लागि आवाज रद्द गर्नुहोस्। यद्यपि, एक दमन हेडफोनले कम गड़बडी प्रदान गर्न कुशन र शरीरको साथ ध्वनिलाई धमिलो पार्नेछ।
केहि हेडफोनसँग डोल्बी डिजिटलसँग उपयुक्तता छैन। जबकि यो सर्वोपरि छैन, डॉल्बीको समर्थन ध्वनि गुणस्तर र आउटपुटलाई अनुकूलन गर्न अझ राम्रो हुन सक्छ। धेरै व्यक्ति बास रुचाउँछन्, तर केहि हेडफोनमा बास ड्राइभरहरूको अभाव हुन्छ। डोल्बी डिजिटलको लागि चारैतिरको ध्वनिलाई भ्रमित नगर्नुहोस्; ती दुबै फरक छन् र अलग विचार आवश्यक छ।
सूचीमा अधिकांश हेडफोनहरूको डक प्रणाली हुन्छ। यसले तपाईंको हेडफोनलाई टिभी र अन्य उच्च-शक्ति इकाइहरूमा जडान गर्न सक्षम गर्दछ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको डकि unit एकाई टिकाऊ छ, धेरै उत्पादकहरूले उपकरणको अखण्डतामा फोकस गर्दैनन्। यो एक चार्ज योग्य विकल्प र व्यापक जडान को लागी बहुमुखी एनालग समर्थन हुनु पर्छ।
यदि तपाईंसँग बहु सदस्यहरू छन् भने, तब एक डक जसले तपाईंको हेडफोन समर्थन गर्दछ तपाईंको टिभीको अडियो आउटपुटमा निर्भर नगरी सँगै चलचित्रहरूको आनन्द लिन उत्तम हुन्छ।
अन्य सुविधाहरू विचार गर्न:
यहाँ हेडफोन चयन गर्दा तपाईले विचार गर्न सक्ने केहि अन्य चीजहरूको सूची छ:
इक्वेलाइजर समर्थन तपाईंको आवश्यकता अनुसार ध्वनि गुणस्तर अनुकूलन सक्षम गर्न।
ध्वनी गुणस्तर र आउटपुट विचार गर्नुपर्छ। HD ध्वनि समर्थन आजको संसारमा अपरिहार्य छ।
यदि तपाई बास मन पराउनुहुन्छ, तब हेडफोन बास समर्थन संग उपलब्ध छन्।
भोल्यूम समायोजन र समर्थन सुविधाजनक हुन सक्छ
शक प्रूफ, वाटर प्रूफ, र मौसम प्रूफ सुविधाहरूले यसको जीवन बढाउन सक्दछ
ग्यारेन्टी वा ग्यारेन्टी फाइदाजनक हुन सक्छ विशेष गरी उच्च-अन्तको हेडफोनहरूको लागि।
प्रश्न: कसरी सक्रिय शोर रद्द रद्द मानक ध्वनि रद्द भन्दा फरक छ?
प्रापक:सक्रिय आवाज रद्द सामान्यतया हेडफोनमा अतिरिक्त कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। जब तपाईं आफ्नो हेडफोन प्लग र प्ले गर्नुहुन्छ, यी कम्पोनेन्टहरू सक्रिय हुन्छन्। केहिसँग विकृतिको प्रतिशतक हुन्छ जुन उनीहरूले सिर्जना गर्छन्। अरूसँग काउन्टर कम्पन हुन्छ बाहिर आवाज हल्लाउन को लागी। यस बीच, मानक आवाज रद्द तपाईंको हेडफोनको कुशन र सामग्रीलाई भिजाउने वा ध्वनि रद्द गर्नमा निर्भर गर्दछ।
Q: के यो सार्वजनिक रूपमा तपाईंको हेडफोन लगाउने ठीक छ?
प्रापक:त्यहाँ यात्रा मैत्री हेडफोन छन् जुन तपाईं लगाउन वा सार्वजनिकमा बोक्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, चलचित्र वा होम थिएटरहरूको लागि हेडफोन बिभिन्न रूपमा निर्माण गरिन्छ। तिनीहरूले तपाईंको घरको आराममा तपाईं राम्रो प्रदर्शन ल्याउँछन्। तथापि, तिनीहरू सजिलैसँग तपाईंबाट सार्वजनिक ध्यान भंग गर्न सक्छन् जुन दुर्घटनाहरूको सम्भावना निम्त्याउन सक्छ। सार्वजनिकमा 'homethreate' हेडफोन लगाउनु राम्रो होइन।
प्रश्न: के तपाईं हेडफोन डकको साथ सिधै ज्याक मार्फत जडान गर्न सक्नुहुन्छ?
प्रापक:डकि station स्टेशनको साथ आएको हेडफोनसँग सामान्यतया ईयरफोन ज्याक वा प्रत्यक्ष जडानको लागि aux एकीकरण विकल्प हुँदैन। वैकल्पिक रूपमा, जैक विकल्प तपाईलाई सामिल हुनको लागि कागजातमा उपलब्ध हुनेछ। यसले तपाईंलाई कुनै पनि उपकरणमा तपाईंको डक जडान गर्न अनुमति दिनेछ। जे होस्, डक र हेडफोन मुख्य रूपले प्रतिबन्धित ब्लुटुथ जडान मार्फत जडान गर्दछ।
प्रश्न: के तपाईं ब्लुटुथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ हेडफोन सिधा डक बिना?
प्रापक:यो मोडेल र यसको सुविधाहरूमा निर्भर गर्दछ। केहि हेडफोनसँग अन्य उपकरणहरूमा सिधै डक्सको आवश्यकता बिना जडान गर्न विकल्प छ। धेरै जसो केसहरूमा, तपाईलाई होम थियेटर हेडफोन सुरक्षित गर्न डक चाहिन्छ। यो कुनै खराबी को सम्भावना रोक्छ र राम्रो जडान प्रदान गर्दछ।
सबै उपकरणहरूमा उल्लेखनीय ध्वनि आउटपुट छैन। तिनीहरू मध्ये केहीलाई होम थिएटर चाहिन्छ। यद्यपि, आजको संसारमा, होम थिएटरहरू एक अशान्ति भएको छ। यदि तपाईं आफ्नो छिमेकीहरू वा परिवारका सदस्यहरूको बारेमा विचारशील हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यी हेडफोनहरू विचार गर्नुपर्छ।
हामी विभिन्न समावेश गर्न निश्चित गर्नुहोस्चलचित्र हेर्नका लागि उत्तम हेडफोनबजेट-मैत्री विकल्पहरूदेखि बहुमुखी र themes्ग थिमहरू, र ठूला ब्रान्डहरूमा तपाईंलाई फिल्महरू हेर्नका लागि उत्तम हेडफोन लिन मद्दत पुर्‍याउँछ! कुनै पनि कुराले तपाईंलाई रोक्न नदिनुहोस्, विशेष गरी गडबड वा कनेक्टिविटी होइन, यी बलियो हेडफोनहरूको साथ।
चार्ज नभएको एयरपडहरू केस कसरी मिलाउने?
अनलाइन २ free निःशुल्क फिल्महरू हेर्नुहोस्
अनलाइन नि: शुल्क पूर्ण नयाँ फिल्महरू हेर्नुहोस्
PS4 स्लिंग टिभी छ
नि: शुल्क चलचित्रहरू अनलाइन नि: शुल्क चलचित्रहरू अनलाइन
एमेजोन प्राइम निःशुल्क परीक्षण सदस्यता कति लामो हुन्छ
कसरी एयरपडहरू वास्तविक छन् भनेर जाँच गर्ने